Bangiga Inter - 1aviagem.com
Qormadii hore: Luxembourg - Grand Duchy World ee ugu dambeeyay
Qormada xigta: Maxaa lagu booqanayaa Riga? Magaalada oo mideysa naqshadda cusub iyo qaab dhismeedka duug ah - Latvia
Dhejiyay 23 Oktoobar 2019 by Rômulo Lucena
1- Maxaan ugula talinayaa Banco Inter?
Haddii aad u baahan tahay koonto kontorool oo reer Brazil ah sabab kasta ha noqotee, inaad ku nooshahay halkan Brazil, ka shaqayso, ama aad wax u barato, ha noqoto dalxiis, ama inaad dirto ama aad u dirto xawaalado dibedda ah Soojeedinta ayaa ah in aad akaawnkaaga ka furo Banco Inter. Dhammaantiis waa mid dijital ah mana bixinaysid lacagta ajuurada dayactirka, kaararka lacagta, ama khidmadaha bangiga. Koontada waa lacag la’aan, kharashka dayactirkana waa eber.
2- Suuragal ma tahay in la isticmaalo kaarka bangiga ee loo yaqaan 'Inter kaarka dibadda'?
Haa, marka laga reebo koontada dijitaalka ah sidoo kale wuxuu leeyahay kaarka deynta. Calanka kaarku waa Mastercard. Waxaad kaloo adeegsan kartaa kaarkaaga bangi ee dibedda. Marka safarka caalamiga ah waad isticmaali kartaa hawsha deynta.
3- Maxaanse waxan oo dhan uga samaynayaa ganacsigaan ka socda Banco Inter?
Sababta oo ah ayaan u isticmaalaa waxayna iga caawisaa inaan kaydiyo lacag aad u fara badan (iyadoo la bixinayo ajuuro aan loo baahnayn) iyo waqti (safka iyo banki) si aan u safri karo intaa ka badan. Aniguna waxaan u malaynayaa inay sidaas oo kale kuu caawin karto. Oo kanina waa baloog safar, oo leh talooyin safar, Waxaan moodayay in tilmaantan maaliyadeed ay ku habboonaan karto!
Tusaale ahaan, kahor intaan koonto ku leeyahay koontayda waxaa la iga rabaa inaan bixiyo ajuurada Doc ama TED iyo “dambiilaha adeegyada” in aanan waligey weydiisan laakiin bankigeygii hore ayaa i riixay. Sannad kasta waxay ku dhejin lahaayeen kaarkayga amaahda ee 'Banco do Brasil' waana inaan ku lumiyaa waqti aan kaga dhigo hanjabaad ilaa ay ka helaan arrintaas eedayn aan habooneyn. Wax kale oo aan ahayn bixinta TED's 12,00 haddii loo wareejiyo koonto bangi kale. Bil kasta eedeymaha ayaa yimid $ 30,00 Tani waxay ahayd wax aad looga xumaado. Sannad walba waxay iga qaateen qiyaastii R $ 360,00 iyagoo leh “khidmadaha bangiyada iyo khidmadaha”. Taasina waa wax badan!
Ilaa iyo markii ugu horreeyay ee aan la kulmay Banco Inter bilowgiisii, sidii “badmaax markiisii ​​ugu horeysay” oo aan ka baqay, tani ma shaqeynaysaa? Si dhab ah ma u shaqaysaa? Lacag ma la saari doonaa bilo kadib? Waxaan qaatay imtixaanka waana jeclaaday. Hadana waa hore dhowr sano jir mana jiro lacag dheeraad ah oo soo baxday. Marka waxaan u guuray Banco Inter waxaanan badbaadiyey lacag aad u fara badan sannadihii, si aan dhaqaalahan ula socdo waxaan horeyba u ballamay safarkayga soo socda waxaanan tijaabin doonaa kaarka cusub ee imminka yimid.
Waxay leedahay tikniyoolajiyad aan lala xiriirin, (taasi micnaheedu waa inaad kaarka u dhoweysid mashiinka, geli lambarka sirta ah waxayna bixinaysaa biilka).
Waa teknolojiyad cusub, oo muujineysa in bangigu runtii keenay aragti cusub isla markaana uu ku dhagan yahay teknoolojiyad cusub.
4- Kaarka Kadiba
Barnaamijka moobiilka, taas oo qasab ku ah kuwa u isticmaali doona Bangiga Inter maadaama aysan lahayn laamo, waa wax keena khibrad wanaagsan.
Waxay leedahay meel suuq (meel ay wax ku iibsadaan) App-ka laftiisa oo ku siinaya lacag-celin kuwa wax ku iibsada iyada oo ka socota shirkadaha ka diiwaan gashan. Waxay u muuqan kartaa wax yar, laakiin ma ahan. Soo laabashadu way ka fiicantahay barnaamijka Ogeysiiska Sharci ee dowladda, uma baahna is-diiwaangelin horudhac ah, kaliya ku iibso barnaamijka "suuqa".
Hagaag, waxkasta maahan ubaxyo, maaddaama qodobka xun uu yahay arrinta ah in aan la awoodi karin in lagu wareejiyo mileyaasha iyo tikidhada diyaaradaha. Aniga ahaan, tani waa khasaaraha ugu weyn.
Mid kale waxay noqon laheyd arrinta jadwalka bixinta lacagta akoonka. Shirkadaha qaar ayaan wali awoodin xulashadan. Malaha waa iskaashi la'aan isaga. Tusaale ahaan, waxaan ka imid Brasilia waxaanan u baahanahay inaan bixiyo biilka korantada ee CEB. Sababo dartood ayaan awood ugu lahayn inaan koonto ka xisaabiyo Banco Inter. Waxaan fahansanahay in Bangigu uu ka yimid Minas Gerais, taas oo ah, gobol kale oo yar oo aan wali laga aqoon Brasilia. Laakiin waxaa suurta gal ah in laga baxo xisaabta. Laga yaabee mustaqbalka tani waa suurtagal.
Immisa ayaan helayaa xayeysiintaan aan ku samaynayo xayaysiiska Inter Bank?
Haa, waxaan kasbadaa isla heerka ay bangigu igu dallacdo! 😆. Iyo sababta aan u go'aansaday inaan kaga hadlo waxa ku saabsan bogga safarka? Sababta oo ah tilmaantani way ku caawin kartaa. Dabcan haddii ka dib markaan arko post this Inter Bank doonayo inuu arko nooc ka mid ah kafaala qaadka this blog waan ka mahadcelin lahaa. Laakiin doorbidistu waxay weli noqon doontaa nidaam mayl ah. Taasi wax bay u tari lahayd qof walba!
Bangi dijital ah + Qalabka Goobta Suuqa + heerka eber + maalgashiga oo dhaliya wax ka badan keyd la'aan iyada oo aan la qaadin khidmado = Interbank.
Si aad u furato koontadaada bangiga bilaashka ah halkan guji: Bangiga Inter
(Xiriirka isku wareejinta waxay la mid noqon doontaa casuumada saaxiibkey casuumada).
Waxaan halkaan joogaa, iyo haddii aad rabto inaad uga tagto faallooyinka haddii tilmaantan ay ku caawisay ama haddii ay jirto bayaan kale oo maqan. Xun. 😎